YAANYADA CHERRY: SIFOOYINKA WANAAGSAN IYO HALABUURKA YAANYADA - BEER CAGAARAN
Yaanyada cherry ka mid ah dheer, kala duwan oo hore u bislaaday yaanyo, sida caadiga ah casaan, inkastoo noocyo leh jaalaha, cagaaran iyo xitaa madow la heli karaa.
Miraha badanaa waa yar yihiin (10-30 g), laakiin sidoo kale waxay heleen cabbirka kubbadda golf. Qaabku wuxuu ku kala duwan yahay waxoogaa yar oo udhaxeeya.
Tamaandhada waxaa loo isticmaalaa sidii cunto fudud, qurxinta suxuunta, lagu daray saladh, qasacadeysan iyo xitaa la qalajiyey. Waxa lagu kaydin karaa cusub muddo dheer, taas oo isbarbardhigi karta noocyada caadiga ah. Oo ay uga mahadcelinayaan qabsashadooda, waxay awoodaan inay koraan maaha oo keliya goobta bannaan ama koriyo, laakiin sidoo kale guriga.
Ma taqaanaa? Wixii sii kordhaya ee guriga ku jira weel yar, dooro noocyo isku dhafan, oo aan ka sarrayn 30-40 cm. Yaanyo cherry lagu beeray bishii Maarsi wuxuu midho u dhali karaa ilaa sanadka Cusub.
Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada
Iyada oo ku xiran kala duwanaanshaha, halbeegyada kiimikada iyo qiimaha nafaqada way kala duwan yartahay, laakiin celcelis ahaan khudraddan waxaa ku jira waxyaabaha soo socda:
fitamiino (A, B1, B2, B6, B9, C, E, K, PP);
Macruufiyeyaasha (potassium, kalsiyum, magnesium, sodium, sulfur, fosfooraska, chlorine);
walxaha raadraaca (boron, birta, iodine, cobalt, manganese, copper, molybdenum, fluorine, zinc, chromium).
Thanks to tifaftirkan qani ah, yaanyada cherry waxay awoodaan inay faa'iido oo mararka qaar waxyeeleeyaan.
Sida qiimaha nafaqada, ka dibna 100 g yaanyo kuwan ka kooban 18-24 kcal. Carbohydrates (badanaaba sonkorta) waxay u dhigantaa 74%, borotiinnada - 17%, dufan (jilicsanaan, jilicsanaan, dabaysha) - qiyaastii 9%. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah biyaha, fibbiyooyinka iyo asiidhyada. Kolestaroolku waa maqan yahay.
Waa muhiim! Qub kasta 16 ilaa 20 mirood ayaa la sameeyaa. Maalin walba waxaa lagula talinayaa in aad cuntid 6 ilaa 8 gogo '.
Faa'iidooyinka yaanyada cherry. Qaab-dhismeedka iyo guryaha
Muujinta habdhaqan noocan oo kale ah, aynu ogaanno sida yaanyada cherry ay faa'iido u leedahay.
Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin dhadhan wacan waxayna qurxin karaan wax kasta oo saxan oo leh muuqaalkooda (meeshii lagu dari karo si toos ah, iyada oo aan la jarin), iyo xaddiga fiitamiinada, antioxidants iyo sonkorta ee miraha kuwan waa 1.5-2 jeer ka sarraysa noocyada waaweyn.
Fiitamiinada kor ku xusan, macro-iyo mareeyn, folic acid iyo nicotinic acids ayaa faa'iido u leh jirka aadanaha. Faytamiin K ayaa ka qaybqaadata nuugista kalsiyum iyo caadada u kelyaha. Serotonin waa bedelka daaweynta niyadjabka iyo waxay hagaajineysaa niyadda. Chromium waxay ka caawineysaa in ay si deg deg ah u qanciso gaajada.
Noocyo yaryar oo casaan ah ayaa ku jira lycopene, taas oo yaraynaysa suurtogalnimada in uu ku dhaco kansarka (hunguriga, caloosha, mindhicirrada, sambabada) iyo cudurrada xubnaha jirka ee habka wadnaha.
Waa muhiim! Lycopene waa walax dufan leh, sidaa daraadeed si loo kordhiyo faa'iidooyinka ay u leedahay inay isticmaalaan yaanyada cherry oo ay weheliso labeen dhanaan, saliid ama khudrado kasta oo ku salaysan dufanka. Daaweynta kuleylku ma baabi'i doonto, laakiin waxay kordhin doontaa tayada waxtarka leh ee kaararkaan.
Mirahaas waxaa lagula talinayaa in ay sidoo kale isticmaalaan dhiig yaraanta, luminta xoogga, hypovitaminosis, dhiig yari, u nugul hypertension, oo leh cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka.
Waxyeelo yaanyo yaryar ah iyo jahannamo
Iyada oo dhammaan hantideeda faa'iido leh, waxaa jira xaalado marka aan lagugula talin inaad isticmaasho yaanyada cherry, ama qadarkooda waa in ay xadidan yihiin. Yaanyadaas, iyo sidoo kale sida caadiga ah, ayaa ka horjoogsan dadka qaba xanuunka shakhsi ahaaneed, xasaasiyad khudaarta cagaaran iyo miraha leh xanuunka dheef-shiid kiimikaadka.
Kuwa xanuunsan ee cholelithiasis waa in aysan ku xad-gudbin, maadaama ay leeyihiin saameynta choleretic ah. Noocyada dabiiciga ah ee ku jira miro ayaa ka xanaajin kara xajiinta caloosha iyo, sababtaas darted, isticmaalka in ka badan 100 g maalintii ayaa si xun u saameyn doonta bukaanka qaba boogta faafa.
Sida loo doorto yaanyo tayo sare leh oo tayo leh
Dhammaan talooyinka soo socda ee ku saabsan sida loo doorto yaanyo cherry ayaa kaa caawin doona inaad hesho miraha tayada sare leh.
Calaamadda koowaad ee qaangaadhka waa ur. Waa inay noqotaa mid casri ah, dhadhan fiican leh, oo cad cad. In miraha, cagaaran oo cagaaran oo aan ku tunta on geedka canabka, waxaa jiri doona ku dhawaad ​​caraf udgoon.
Ka taxadar aagga talaabada. Waa inay ahaato mid xikmad leh oo leh midab dabiici ah. Haddii kale, yaanyada ku jira ku dhowaad lahayn nafaqooyin, sida ay u bislaadaan goosashada ka dib.
FHaddii ay suurtogal tahay, gooyso midhaha, gooyaa waa inay noqotaa casiir leh, oo leh qolal gudaha ah oo buuxa. Waxaa lagu talinayaa in ay doortaan mid dhexdhexaad ah, bislaado, yaanyo qurux badan, oo aan lahayn cillado.
Ma taqaanaa? Heerkulka qolka, miraha bislaaday ayaa la kaydin karaa ilaa wiigii, iyo haddii aad ku ridayso qaboojiyaha, mudadaas waxay kordhin doontaa dhowr jeer.
Sida aad arki karto, yaanyada cherry waxay leeyihiin sifooyin badan oo waxtar leh oo aan macquul aheyn. Kani waa dukaanka nafaqada. Haddii aad dooran karto midig, midhihii bislaaday, waxay noqon doonaan wax aad u weyn oo suxuuntaada ah.